6 ayaa bixisay barnaamijyada iPhone-ka ee aad iska soo degsan karto Agoosto 13 - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »6 barnaamijyada iPhone-ka ah ee lagu bixiyo waxaad kala soo bixi kartaa bilaash Agoosto 13 - BGR
Liiska barnaamijyadooda ugu lacagta badan ee lagu iibsado iPhone iyo iPad ee bilaash lagu iibinayay oo si bilaash ah loogu iibin jiray waxay ahayd wax fiican, welina waxaa jira qaar soo dejisan bilaash ah. Hadaad seegtay, xaqiiqdi dib ugu noqo oo soo celi iyaga . Markaad dhammaysato, waxaan kuu haynaa lix bilo-bilaash oo adiga kuu gaar ah kulanka talaadada, laakiin waxay bilaash u yihiin waqti xaddidan, markaa hel iyaga intii aad karto.
Maqaalkani wuxuu daboolayaa barnaamijyada lacagta lagu bixiyo ee loogu talagalay iPhone iyo iPad kuwaasoo bilaash looga dhigay wakhti xadidan oo ay sameeyeen soosaarayaashu. BGR kuma lihi wax barnaamij ah oo soo saareyaasha ah. Ma jiro hab la yiraahdo mudada ay xor noqon doonaan. Iibkaan ayaa ku dhamaan kara saacad ama usbuuc. Sida iska cad, waxa kaliya ee aan dammaanad ka qaadi karno waa inay ahaayeen kuwa xor ah xilligii qorista maqaalkan. Haddii aad gujiso xiriiriyaha oo aad aragto sicir lagu soo bandhigayo arji halkii aad ku isticmaali laheyd ereyga "hel", lacag la'aan ma aha. Iibkii wuu dhammaaday. Haddii aad kala soo baxdo barnaamijka wax uun, Apple ayaa kugu dallaci doona. Barnaamijyada qaar waxay lahaan karaan iibsiyada gudaha oo dheeraad ah. Ku soo celi RSS feed in la ogeysiiyo sida ugu dhakhsaha badan ee daabacaadyadan loo daabaco waxaadna ka fogaanaysaa iibka maqan ee aan dabooli karno.
Qiimaha Safarka AR
Waxaan abuurnay sirdoon farshaxan oo casri ah (AI) si looga caawiyo dalxiisayaasha inay yareeyaan walbahaarka markay kala saarayaan qiimaha lacagta. Kaliya tilmaame kaameeraha sicirka dukaanka ama makhaayadda, iyo AI-gaagu wuxuu ku dhejin doonaa warqad dheh dheellitirka qiimaha sare ee shaashaddaada ah.
Muxuu qabtaa dalabka:
1. Aqoonsiga qiimaha oo u beddela lacag kasta oo adduunka ah.
2. Waxay ka shaqeysaa khadka tooska ah, wax xiriir internet ah looma baahna
3. Waxay bixisaa hab dhakhso leh oo aad gacanta ugu beddesho qiimaha.
4. Ku keydi sawirrada leh dhejisyo sawirro leh.
Waxaan rajeyneynaa in TravelPrice ay noqon doonto wehel safarkaaga joogtada ah!
Soo degso Abaalka AR Travel Award
Soo dejiso taangiyada yaryar!
Cimilo - Saadaasha adduunka
Caadi ahaan 2,99 $
Aad u fudud oo fudud in la isticmaalo codsiga cimilada:
- Beddel boos
- Celsius iyo Fahrenheit
- Mawduucyada U-gaarka ah ee 6
- Berrito iyo maalinba maalinta ka dambeysa
- Meel otomaatig ah
Soo dejiso Cirka - Saadaasha Caalamka
Gabar Knight ah - 3 Match Puzz
Caadi ahaan, 4,99 $
Gabadha 'Knight' waa ciyaar halxiraalaha ah (Match-3) oo laga soo saaray soosaarayaasha caanka ah ee taxanaha "The the tax tax".
Ku soo dhowow boqortooyada sixirka gabadha Knight!
] Ku biir safar aad u xiiso badan, kulanno cusub iyo guulo!
Ciyaar xiisa badan, heerar badan iyo doonis la'aan jacayl iyo farxad!
Baadh adduunyada qarsoodiga ah ee gabadha 'Knight', la kulan dadkeeda oo ballaadhiso dhinacyadaaga!
Jidkaaga, waxaad la kulmi doontaa jilayaal midab leh oo kula wadaagi doona qarsoodigooda farxad.
Gunnooyin kala duwan iyo astaamaha ciyaarta ayaa kuu oggolaanaya inaad si fiican u fiiriso ciyaarta caadiga ah ee ciyaarta '3 ciyaarta ciyaarta'.
Kajawaac wacyigelinta gabadha 'Knight'!
Mechan Farsamoyaqaannada ciyaarta aan caadiga ahayn! Gunnooyinka cusub iyo astaamaha cusub ee lagu beddelayo ciyaarta caadiga ah ee '3 ciyaarta ciyaarta'
Ad Khasaare naxdin leh: Ku raaxayso bambaanooyinka iyo gantaallada lagu ciyaaro goobta ciyaarta!
In ka badan 200 qaadista heerarka ciyaarta!
● Si fudud oo dhakhso leh: gameplay fudud in la barto!
Dunidan sixirka: boqortooyo cirfiid ah oo leh degganeyaal badan oo firfircoon
Soo dejiso Gabadha Knight - Match 3 Halxiraalaha
Ciyaar halxiraalaya oo dabacsan oo leh qallooc barbaarineed
Ciyaarta dareenka ah oo aad u fudud. Hawshaadu waa inaad iskudarto muuqaal xayawaan midabo leh oo ka kooban qaybo kala jaad ah. Xaqiiqooyin cusub oo la yaab leh oo ku saabsan xayawaanku sidoo kale way muuqan doonaan oo waad la wadaagi kartaa asxaabtaada!
Toddobo qaaradood, in kabadan heerarka 80 gaar ah oo leh xayawaan qurux badan. Adigoo ciyaaraya ciyaarta, kaliya maahan inaad madadaalo u hesho, laakiin waxaad waxbadan ka baran doontaa xayawaanada kala duwan ee ku nool meeraheena.
Imtixaanadaada ku tijaabi habka Waqtiga. Si aad u hesho dhamaan xiddigaha, waa inaad ku dhammeysaa howsha 30 sekan. Waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn marka hore, laakiin markaa waxaad la yaabi doontaa sida xirfadahaagu u kobcaan markaad ciyaareyso.
Markaad xalliso heer, waxaad ku wadaagi kartaa muuqaalka xayawaan ku jira Apple Watch waxaadna abuuri kartaa wejiga saacad gaar ah.
- Raadi hiwaayad nabad iyo nasasho leh saacado;
- Imtixaan ka qaado xirfadahaaga joomateri;
- Samee fikirkaaga caqliga iyo xusuustaada;
- Baro wax badan oo ku saabsan flora iyo fauna ku wareegsan
Soo Degso Cardinal Land 19659009] MovieSpirit - Movie Maker Pro
Guud ahaan, waxaad bixisaa 9,99 $
Ma rabtaa in aad sameysid microfilm gaar ah?
Ma rabtaa inaad noqoto agaasime, soo saaraha, jilayaasha xiddigga?
In MovieSpirit, jilayaashaas
Thanks to ScreenSpirit, waxaad isku dari kartaa warbaahinta kala duwan, sida fiidiyeyaasha, sawirada, muusigga, qoraalka, cajaladaha qoraalka iyo qoraalka, iyo, hadba hal-abuurkaaga, iyaga iskudubar iyaga oo ku dar waxyeelo kala duwan wareegga muuqaalka, qoraalka qoraalka, saameynta filterka, hordhaca video, maskadaha, iwm.) si aad u abuurto microfilm u gaar ah.
Hawlaha ugu muhiimsan:
- gooya, kala go', iskudhafka iyo iskeelka cabiraha qaybaha warbaahinta
- Fiidiyowga sawirada badan leh (saamaynta masawirka sawirka), tirada fiidiyoowga lama xadidin
- Ku dar maaskaro (maaskaro, maaskaro, maaskaro wareega, maaskaro qoraal ah, iyo maaskaro maskaxeed) si aad u qariso ama muujiso qaybo ka mid ah fiidiyowga
- Qalabaynta qalabka (qalabyada hababka caadiga ah sida Qalabka Qalabka, qalabka Lasso, Qalabka Caadada ah iyo Qalabka qoraalka loo isticmaalo sawirka sawirka)
- Fiidiyo hore, muuqaal muuqaal ah, ku dar sawiro sawir tartiib tartiib ah video (xawaare tartiib ah 1 / 16 ilaa 16)
- Muuqaalka wareega ee shahaadada 360
- Muuqaalo badan oo isku dhafan
- Farshaxanada kala duwan, qoraalada qoraalka ah, midabka qoraalka, muusikada, hooska, qoraalka, iwm.
- Muusikada bilaashka ah iyo saameynta codka ee ku dhegan qaabab kala duwan, kuna darista muusikada kombiyuutarkaaga ama iTunes, kana soo saarto maqalka fiidiyowyada
- Diiwaanka codka
- Si toos ah uga sawir fartaada fartaada fartaada
- Qiyaasta fiidiyowga ee xirfadlaha ah, jadwalka koritaanka, lakabka aan xadidneyn
- Maareyn fudud oo sahlan oo toos ah
- Waxaa lagu daray mosaic laga saari karo
] - Midabka asalka u gaarka ah
- Iftiiminta la isku qabsado, istiraatijiyadeenta iyo cufnaanta
- Abuur Gif animation gaar ah
- Cinwaannada gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay ee horudhaca (si gooni gooni ah loogu iibiyo)
- Daraasiin saamaynaya shaandhaynta (sawir, farshaxanka, kalluumaysiga, muraayadaha weyneeya, shaandhada midabka, iwm.)
- Meelo badan oo ka mid ah saameynta isbedelka muuqaalka
- Fiidiyowga / sawirka waxaa loo qaabeyn karaa qaabab kala duwan sida wareegyada, wadnaha iyo dheemannada, iyo xitaa qaabaynta qaababka gaarka ah.
- Furaha Chroma Key waxaa loo dejin karaa muuqaallo muuqaal ah / sawirro, sida in meesha laga saaro midab adag oo asalka ah (shaashadda buluugga ah ee shaashadda leh)
- U rog rog fiidiyowga / sawir madow iyo caddaan, muuji qaybta si aad u iftiimiso (Midabka buufiya)
- inaad si xor ah ugu weeciso fiidiyowga / sawirrada qaabab aan caadi ahayn
- Ku dar dhibco dhaqdhaqaaqa sawirrada / sawirada / qoraalka si aad u guurto, udhaqaajiso, u rogaan, una wada dhaqaaqaan si ay u abuuraan waxyaabo badan oo qurux badan
- Hordhaca Real-time, wax-soosaarida fiidiyowga sare
- Kaga soo qaad kombuyuutarka waxyaabaha ku duuban qalabka tooska ah ee Wi-Fi: fiidiyowyada, sawirrada, muusikada iyo animada GIF
- Badbaadi oo wadaagto shabakadaha si toos ah shabakadaha bulshada sida Facebook, iCloud, WeChat, Boostada, iwm.
Download MovieSpirit - Movie Maker Pro